Phakathi ezihlukahlukene ukunyakaza, ezifana wafunda ingxenye physics, njengoba kinematics, kukhona enjalo lapho umzimba nganoma yisiphi ngezikhawu ezinqumela akhethiwe alinganayo isikhathi sihamba alinganayo obuphelele izingxenye indlela. It - ezinyakazayo iyunifomu. Isibonelo ukuhamba skater maphakathi no-ibanga isitimela noma elula flat.
Kwakucatshangwa ukuthi umzimba Ungahambisa kanye iyiphi indlela, kuhlanganise banana. Kulokhu, lapho umqondo ngendlela - ngakho ibanga umzimba kanye endleleni yayo. Path - eliningi scalar, futhi akufanele kudidaniswe ukunyakaza. Igama elithi yokugcina isho nesikhathi esithileko hlangana yokuqalisa futhi indlela yokugcina okuyinto siyahamba curvilinear ngamabomu asishayisani nge trajectory. Izikhangibavakashi - vector ubuningi kokuba value kwamanani ulingana nobude vector.
Lo mbuzo ubuzwa - kwezinye izimo sikhuluma ukunyakaza iyunifomu? It ezocatshangelwa ngokunyakaza iyunifomu, njengemoto carousel umbuthano ngejubane elifanayo? Cha, ngoba Isivinini ezinyakazayo enjalo Vector ishintsha indlela yayo ngomzuzwana.
Esinye isibonelo - imoto ohamba emgceni locondzile ngezinga elifanayo. ngokunyakaza okunjalo kuyothathwa iyunifomu, ngenkathi imoto ngeke Roll up kanye umshini wokubonisa izinga lejubane kuba inombolo efanayo. Ngokusobala, le nhlangano iyunifomu njalo kwenzeka emgceni locondzile, vector Isivinini aliguquki. Indlela kanye ukunyakaza kulokhu kuyoba okufanayo.
ukunyakaza Uniform - ukunyakaza ngendlela iqonde umugqa trajectory ngesivinini njalo, lapho ubude indlela siwela ngezikhawu nganoma yisiphi isikhathi ngezikhathi ezithile ayafana yini. Ikesi ekhethekile motion iyunifomu kungenziwa kubhekwe njengendlela isimo ukuphumula, lapho ijubane futhi ibanga kuyinto ilingane no-zero.
Speed kuyinto qualitative isici iyunifomu ezinyakazayo. Ngokusobala, izinto ezahlukene ungomunye futhi ngendlela efanayo ngesikhathi ezahlukene (abahamba ngezinyawo futhi imoto). Isimo Sengqondo basibekela nombala ezihambayo maqondana ubude isikhathi lapho indlela sidlulile, ngokuthi lingakanani ijubane lokuya.
Ngakho, ifomula echaza ezinyakazayo iyunifomu, imi kanje:
V = S / t; lapho V - Isivinini (ubuningi vector);
S - noma ezihambayo endleleni;
t - isikhathi.
Ukwazi ijubane, okuyinto njalo, singakwazi ukubala indlela siwela umzimba nganoma yisiphi isikhathi ngokungadingekile isikhathi.
Ngezinye izikhathi ngephutha elixutshwe ngokulinganayo futhi nombala yashesha ezinyakazayo. Lona umqondo ohluke ngokuphelele. Nombala yashesha ezinyakazayo - omunye samuntu ezinyakazayo engalingani (.. Okungukuthi ukuthi lapho ijubane akuyona njalo), okuyinto has isici esibalulekile - ijubane enjalo ngokunyakaza kuyahluka ngezikhathi efanayo kwenani elifanayo. Lokhu value uyalingana isihlobo Isivinini umehluko ubude ngesikhathi lapho ushintsho ijubane libizwa ukushesha. Le nombolo ekhombisa isamba lapho isivinini luyanda noma kwehle per unit isikhathi lingaba likhulu (ke bathi umzimba ngokushesha ukuthola noma ukulahlekelwa ijubane) noma azinakwa uma into ngesivinini noma kubambezela ngaphezulu kahle.
Ukusheshisa kanye velocity iyona Vector ubuningi ngokomzimba. Ukusheshisa Vector ohlangothini njalo kuvumelana Vector velocity. Isibonelo ezinyakazayo nombala yashesha kunjalo mahhala ukuwa mayelana nale ndaba, lapho isivinini falling (isivinini ebusweni Luhambo into zomhlaba) siyahlukahluka iyunithi isikhathi by inani elithile okuthiwa ukusheshisa mahhala ukuwa.
ukunyakaza Uniform kungaba kwakuthiwa abhekwe njengesigebengu yintfo lekhetsekile nombala ngesivinini esikhulu. Kusobala ukuthi njengoba ijubane ngokunyakaza enjalo engashintshwa, ukusheshisa noma deceleration ingekho, Ngakho-ke, inani ukushesha ngesikhathi ezinyakazayo iyunifomu uhlale ilingane no-zero.
Russian isikali stratigraphic. isikali stratigraphic International
Kuyini ngesiphuphutheki? izinhlobo iziphuphutheki
Ukungazinzi komnotho omkhulu
Iyini inqubo methodological? Izinhlobo kanye nokubekwa ngezigaba amasu sekufundzisa. amasu Instructional ekilasini
Chloroform - kuyini? Ukulungiselela kanye isicelo isinyathelo of chloroform
Ukubuyekeza: Goa - ucezu eliyipharadesi zonke
Isakhi pool - value core lwesintu
Kungani bonke abantu bathanda ulalele umculo?
Iyiphi indlela engcono kakhulu e-book?
Hemorrhoidal ngesishayo Izimbangela Nemiphumela
Iziphepho Solar: isibikezelo umthelela womuntu
Isisu: izimpawu kanye nokuphathwa kwezifo zamathumbu